Daawo Wiilkii Warsangali Oo Dubia Looga Yimi Markii C/wali Gaas Gudoomay Gudanii - Bulbul Oo Baahi Loogatagay Garoowe (Daawo Maqal Muqal)
Daawo Wiilkii Warsangali Oo Dubia Looga Yimi Markii C/wali Gaas Gudoomay Gunadii DP World – Bulbul Oo Busarada Garoowe Looga Tagay (Daawo Maqal Muqal)
Fikradaha Muqaalo Wararka Waraysi Wikileaks Youtube April 16, 2017
Garoowe(Allssc): Axmed Cali Xaashi oo Ugu Magacaaban Maamul Beeleedka Garoowe Gudoomiyaha Barlamanka kaas oo dhowaan uu safar dibada ah oo dhaqale lagaga qaadanayay dalka Imaradka Carabta ku wehelinayay C/wali Gaas ayaa lagaga soo tagay Dalka Isutaga Imaradka Carabta.
Ujeedada ayaa la sheegay in Axmed Xaashi looga yimi ay tahay in uusan waxba ka helin Dhaqalaha Malayinta Dollar ah taas oo uu qayb uga qaadi karay dib u dhiska iyo xaaladaha Abaaraha ee ka jira deganka uu kasoo jeedo Axmed Cali Xaashi ee Badhan iyo Dhahar.
C/wali Gaas aya dhaqalaha laga soo helay la tagay magaalada Galkacyo kadibna u dhoofay magaalada Muqdisho wakhti Bulbul Camey looga tagay Busaarada Baahsan ee ka jirta Magaalada Garoowe. Bulbul Camey oo isku dayayay inuu Rajacsado Saxibtinimadii C/wali Gaas kunasoo dhoweeyo Garoowe ayaa isagana laga hoosguuray kaas oo aan wax qayb ah ka heli doonin Dhaqalaha DP World ay ku iibsatay Dekeda magaalada Boosaaso, walow ay jiraan warar sheegaya in Bulbul Camey soo noqodka C/wali Gaas Shaqo k aeryid uu la damacsan yahay Bulbul Cmey sido Gudoomiyihii hore ee Barlamanka Mamul Beledka Garoowe Siciid Xassan Shire.
Iskusoo wada duuboo waxaa uuqata in Hoosgalada la daaqa MAamul Beeleedka Garoowe ay malinba malinta ka danbaysay ay xaladoda kasii liidanayso iyaga oo waayay dhaqalihii ay halkaa ku filayen Shacabkoda kala kulmay Mucaraadadad xoog leh.
Tagged featuredgudoomiyaha barlamanka puntland oo bosaso so ogadhaywararkawararka puntlandwararkii ugu danbeeyay iibinta dekeda boosaasowarejinta dekeda boosaaso DP world